Jamie Vardy oo rikoor cusub dhanka goolasha ugu dhigay horyaalka Premier League kaddib goolashiisii shalay – Gool FM
(Leicester) 29 Nof 2021. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Leicester City ee Jamie Vardy ayaa shalay labo gool ugu shubay kooxda Watford ciyaar ka tirsan horyaalka Premier League taasoo ku dhammaatay 4-2, waxayna goolashiisa sameeyeen taariikh gaar u ah horyaalka Ingiriiska.
Labadaas gool oo uu ku dhaliyay siddeed daqiiqado gudahood ayaa Vardy ku gaaray 93 gool oo Premier League ah tan iyo markii uu jirsaday da’da 30-ka sano, mana jiro xiddig la heer ah laacibkan marka la tiriyo goolasha Premier League ee kaddib da’da 30-maadka iyadoo rikoorkaan uu hore u heystay halyeyga Arsenal ee Ian Wright.
Labadaas gool ayaa sidoo kale goolashiisa xilli ciyaareedkan ee horyaalka gaarsiiyay sagaal gool kaddib 13 kulan, waxaana ka sarreeya kaliya laacibka kooxda Liverpool ee Mohamed Salah.
Marka laga reebo xilli ciyaareedkan, 34-sano jirka reer England ayaa ugu yaraan 15 gool dhalinyay mid kasta oo ka mid ah afartii xilli ciyaareed ee buuxday ee uu Leicester u ciyaaray kaddib dhalashadiisii 30-aad, waxaana uu ugu heer sarreeyay fasalkii 2019-20 markaas oo uu 23 gool dhaliyay shan kalena caawiyay.
War la isuma hayo, Barcelona iyo Manchester United oo dhanka suuqa isku gaad-gaadaya... (Xiddigahee ayay kala doonayaan?)
Goobta iyo goorta lagu balansan yahay Ballon d'Or, xiddiga hoggaanka u haya tartanka & Wax walba oo aad uga baahantahay abaal-marinta Kubadda Dahabka